अदालतको फैसलापछि बादलको बोल्ड निर्णय, प्रचण्डदेखि झलनाथ, बाबुरामदेखि भीम रावलसम्म धक्का !Nepalpana - Nepal's Digital Online
अदालतको फैसलापछि बादलको बोल्ड निर्णय, प्रचण्डदेखि झलनाथ, बाबुरामदेखि भीम रावलसम्म धक्का !
Nepal Pana फाल्गुण १५ २०७७
काठमाडौं । संसद पुनर्स्थापनापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नयाँ निर्णय लिएका छन् । बादलले ३६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओसहित ५२ जना उपसचिव तथा सहसचिवको सरुवा गरेका छन् । अहिले सरुवा अर्थपूर्ण छ ।
सरुवामा प्रचण्ड – नेपाल समूहमा रहेका नेताको जिल्ला परेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि भीम रावलसम्म धक्का लाग्नेगरी सिडिओहरु सरुवा गरिएको छ ।
सरुवा सूची अनुसार पूर्वसहयोद्धा प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा बादलले सिडिओ र सहायक सिडिओ दुबै फेरेका छन्। चितवनको सिडियोमा गृहबाट प्रेमलाल लामिछानेलाई काज सरुवा गरिएको छ । सहायक सिडिओमा लीलाधर अधिकारीलाई पठाइएको छ ।
भीम रावलको गृह जिल्ला अछाममा रुद्र बहादुर मल्लले जिम्मेवारी पाएका छन् । धादिङबाट मल्लालाई गृहले अछामको सिडियो बनाएर पठाइएको छ ।
पूर्वमाओवादी नेता शक्ति बस्नेतको जाजरकोटमा प्रेम प्रसाद देवकोटालाई पठाइएको छ । जसपाका बाबुराम भट्टराईको गृहजिल्ला गोरखामा शालिकग्राम शर्मा पौडेललाई खटाइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको गृह जिल्ला इलाममा धुव्र बहादुर खड्कालाई सरुवा गरिएको छ ।
शुक्रवार गृहमन्त्री स्तरको बैठकले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि अन्यको पदस्थापन तथा सरुवा गरेको हो । पाल्पा, सिन्धुली,महोत्तरी, सुनसरी, सप्तरी, दोलखा, म्याग्दी, लगायत जिल्लाका सिडिओ फेरिएका छन् ।
भाइलाई आईजीपी बनाउने ईश्वरको षडयन्त्रलाई बादलको काउन्टर, संसदीय समितिले रोक्यो पोखरेलको एकलौटी निर्णय !
गृहमन्त्रीले बोलाए आकस्मिक बैठक, के छ नेकपाको रणनीति ?
केपी ओली पक्षको बैठकमा सहभागी भए बादल
बादलले कित्ता परिवर्तन गरेपछी यी नेताले छोडे साथ, प्रचण्डलाई दिए साथ !
फाल्गुण १५, २०७७ शनिवार ०८:०८:४५ बजे : प्रकाशित